Amahhotela angakhuphula kanjani ukuphepha
Amahhotela ambalwa, abe nemigomo yokuhlaselwa kothango esikhathini esisanda kuvuka. Ochwepheshe bacebisa ukuthi umthelela wokuhlaselwa okuningi okunjalo kungenzeka ukuthi ubomvu ...
Amahhotela ambalwa, abe nemigomo yokuhlaselwa kothango esikhathini esisanda kuvuka. Ochwepheshe bacebisa ukuthi umthelela wokuhlaselwa okuningi okunjalo kungenzeka ukuthi wancishiswa waba nezixazululo zezokuphepha ezanele.
Ngokucacile, amahhotela angavimba izingqinamba eziningi uma ngabe izinhlelo zokutholwa kusenesikhathi zazisendaweni, kuzoba lula kakhulu ukubhekana nabashokobezi lapho izinsongo zitholwa kusenesikhathi kunokusebenzelana nazo esimweni sokuphatha.
Iningi lokuhlaselwa kwamaphekula okwenzeka muva nje libonisa ukuthi amaphekula awatholanga ubunzima obuningi ukungena ezakhiweni zamahhotela, ngakho-ke singaphetha ngokuthi izinhlelo zokuphepha zangaphambilini kungenzeka ukuthi zisindise izimpilo eziningi (I-Yitel Attack, njll.) Izinhlelo zokuphepha zingasiza Ukutholwa kusenesikhathi, futhi kungagcina izimpilo eziningi uma zisetshenziswa kahle. Kumele sikhuthaze imikhakha yokungenisa izihambi ukuthi isebenzise kakhulu izindlela zakamuva zokutholwa kwakamuva, isb., Ukutholwa kobuso, amapuleti elayisense yemoto nokufana noma yiliphi amaphekula afunekayo ngaphambi kokuba amaphekula angenele ezakhiweni.
Ama-Analytics kanye nezinhlelo zokulawula ukufinyelela
Ukuze uphikise lezi zinkinga, ochwepheshe bakhombisa izixazululo ezithile ezibalulekile ezintsha ezisetshenziswayo noma okufanele zisetshenziswe. Isibonelo, usebenzisa isoftware ye-Video Analytics, amahhotela angazama ukwenza uhlelo lokuphepha lusebenze kakhulu. Lokhu kusho ukuthi asikho isidingo soqaphi ukuba babekhona kuzo zonke izindawo ngaso sonke isikhathi. Isixazululo se-analytic singakwazisa ukusebenza kwezokuphepha lapho kutholwa usongo. Lokhu kusindisa izindleko ngenkathi kugcinwa ukuphepha.
Izinhlelo zokulawula ukufinyelela okunamandla, ikakhulukazi lezo ezisebenzisa ama-biometric, nazo zidlala indima enkulu embonini yamahhotela. Ochwepheshe baveze ukuthi ama-biometric asetshenziswa kahle ngokulawula ukufinyelela ezindaweni ezithile nakwesikhathi abakhona. Lokhu akusizi nje amahhotela ukulandelela ukunyakaza kwabantu, kepha futhi kuyasiza ekwenzeni ngcono ukusebenza kwebhizinisi. Izixazululo ezifana nelayisense yokuqashelwa kwepuleti (LPR) kufanele futhi zize zisebenziseka njengoba kuzosiza ukuqapha izindawo ezingaphandle zamahhotela nemigwaqo.
I-LS Vision yethu yakamuva ye-5x2MP i-Megapixel IR Night Vision 360 degree PAN Panoramic IP Camera ifanele ukucatshangelwa kwakho:
Inzwa esekelwe ku-5 mosaic 360 degree panoramic ukubukwa;
Imodi eyodwa esebenza kahle futhi yezomnotho yokufakwa kwelensi yezimboni ephezulu yelensi;
Isekelwa ukujikeleza kwezinga ledijithali / ukujikeleza okuqondile / ukusondeza ukubuka izifunda eziningi;
I-5x2.0mp@30FPS noma 10.0MPI@30FPS isinqumo;
Ngu /h.264 High Profile Plafin Compression Technology, ngesilinganiso esiphakeme sokucindezela;
I-ICR infrared finds switch okuzenzakalelayo, qaphela ukuqapha imini nobusuku;
Ukulungiswa kwesoftware yeWebhu kanye neyeklayenti;
Sekela ubukhulu be-SD Micro SD / SDHC / SDXC 128G ikhadi lesitoreji sekhadi lendawo;
Ukuzivumelanisa nezilinganiso ezihlukile zokushisa kanye nomswakama wendawo yangaphandle yokuqapha yesehlakalo;
Sekela i-IP66 grade waterproof nothuli, iK10 Anti Right Design
Ngamagama, le khamera ye-panoramic iyakwazi ukubeka amakhasimende amahhotela ngokukhululeka, aqinisekise ukuthi avikelwe kahle.
PHAMBI Ukubhekwa kwevidiyo kungavikela kanjani ama-ATM ngokuhlaselwa ngokomzimba
Ama-ATM we-Biometric wonke asethelwe kohlamvu lwemali athuthuke ekuqinisekisweni nasekusebenzeni kahle OLANDELAYO